Shina FPGA Fiaramanidina haingam-pandeha haingam-pandeha Fivoriambe sy orinasa | KAISHENG PCB
Fivorian'ny birao fanaraha-maso ny fiara
Tablet PC Turnkey PCB fivoriambe elektronika
Birao fanaraha-maso indostrialy fivorian'ny turnkey feno
Fivoriamben'ny boriborintany haingam-pandeha FPGA
Fanontana Pcb mora vidy ary mpanamboatra ...
China Varotra Pcb Varotra mora vidy miaraka amin'ireo singa mpanaradia ...
China Smd Pcb Manufacturer Quote Cheap - Ems ...
PCBFuture dia orinasa mpanamboatra PCB sy PCB Assembly Company. Nandritra ny 20 taona mahery niavaka tsara indrindra, talenta an'izao tontolo izao ary zava-bita mivoatra, PCBFuture dia lasa lavitra mba ho lasa iray amin'ireo mpamorona sy mpamokatra PCB sinoa ankehitriny. Ny fifantohanay amin'ireo rafitra avo lenta sy azo ekena ara-toekarena miaraka amin'ny tsy fitoviana tsy manam-paharoa dia nahatonga anay ho orinasan'ny safidy manerana an'i Sina.
Vy Coating: Nikela elektrôlika / volamena mafy ary volamena voafantina
Fomba famokarana: SMT +
Sosona: 12 Layer PCB
Fitaovana fototra: FR-4 + RO4003C
Fitaovana vy: Nikela elektrôlika / volamena mafy ary volamena voafantina Fomba famokarana: SMT + Sosona: PCB 12 sosona
Fitaovana fototra: FR-4 + RO4003C Fanamarinana: SGS, ISO, RoHS MOQ: Tsy misy MOQ
Karazana solder: tsy misy firaka (mifanaraka amin'ny RoHS) Serivisy tokana: PCB Manamboatra sy fivoriambe PCB Turnkey Fitsapana: Fitsapana 100% AOI / X-ray / Visual
Fanohanana ny Tehnolojia: Hizaha DFM (Volavola ho an'ny famokarana) maimaimpoana Karazana fivoriambe: SMT, THD, DIP, PCBA mifangaro teknolojia Fenitra: IPC-a-610d
PCB SY PCBA Quick Turn PCB Afivoriambe
Teny lakile: Assembly PCB, fanamboarana PCB, Mponina PCB, Mpanamboatra PCB Assembly, PCB Assembly Cost, Assembly PCB mora vidy, Orinasa fivoriamben'ny birao vita pirinty
PCBFuture dia orinasa mpanamboatra PCB sy PCB Assembly Company. Nandritra ny 20 taona mahery niavaka tsara indrindra, talenta an'izao tontolo izao ary fahombiazana mamorona zava-baovao, PCBFuture dia lasa lavitra mba ho lasa iray amin'ny mpamorona sy mpamokatra PCB sinoa ankehitriny. Ny fifantohanay amin'ireo rafitra avo lenta sy azo ekena ara-toekarena miaraka amin'ny tsy fitoviana tsy manam-paharoa dia nahatonga anay ho orinasan'ny safidy manerana an'i Sina.
Fa maninona no misafidy PCBFuture?
1. Antoka matanjaka
Atrikasa SMT: manana milina fametrahana sy fitaovana fanaraha-maso optika marobe izahay, izay afaka mamokatra teboka 4 tapitrisa isan'andro. Ny fizotrany tsirairay dia miaraka amin'ny mpiasan'ny QC hitazona ny kalitaon'ny vokatra.
Tsipika famokarana DIP: Misy milina fandefasana onja roa. Hain'ny mpiasa amin'ny fametahana fitaovana plug-in isan-karazany.
2. Fiantohana kalitao, fanatanterahana lafo
Ny fitaovana avo lenta dia afaka mametaka ampahany miendrika famolavolana, fitaovana BGA, QFN, 0201. Izy io koa dia azo ampiasaina ho maodely amin'ny fametrahana tanana sy fametrahana fitaovana lehibe. Na ny santionany na ny andiany lehibe na kely dia azo hamokarana.
3. Fanandramana manan-karena amin'ny SMT sy ny fametahana ireo vokatra elektronika, fandefasana milamina
Manomeza tolotra voangona ho an'ny orinasa elektronika an'arivony, misy serivisy fanodinana chip SMT ho an'ny karazan-java-mandeha fiara sy fifehezana indostrialy. Ny vokatra dia aondrana any Eropa sy Etazonia matetika, ary ny kalitao dia hamafisin'ny mpanjifa vaovao sy taloha.
Ireo fitaovana dia hatolotra ara-potoana ao anatin'ny 3-5 andro aorian'ny famitana ny mahazatra, na afaka aterina amin'ny andro iray ihany.
4. Ny fahaizana mitazona mafy sy serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra
Ny injenieran'ny fikojakojana dia manana traikefa manan-karena ary afaka manamboatra vokatra tsy mandeha amin'ny laoniny fanamboarana isan-karazany, ary azontsika atao ny miantoka ny taham-pifandraisana isaky ny boriborintany.
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia hamaly amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny 24 ora ary hamaha ny kaomandanao faran'izay haingana.
Ny fizotry ny famokarana PCBA:
Fanodinana patch patch SMT
Fanodinana plug-in DIP
Fivorian'ny vokatra vita
Ny tombony amin'ny fantsom-panaraha-maso indostrialy PCBA fantsom-pandrafetana PCBFuture:
Ny vidin'ny fividianana ambany. Manana mpiasa mividy matihanina matihanina amin'ny fitaovana elektronika izahay ary manana fiaraha-miasa maharitra amin'ny fantsom-pividianana kalitao sy azo antoka. Amin'ny ankapobeny dia mahatratra ny vidin'ny MOQ tsy misy.
Ahenao ny vidin'ny asa, ampiasainay amin'ny fividianana elektronika, injeniera elektronika, fitaovana elektronika ary faritra IQC, ny mpanjifa dia tsy mila manamboatra.
Mba hampihenana ny vidin'ny materialy, manana fitaovana elektronika fanaraha-maso isan-karazany izahay, ny mpanjifa dia tsy mila manamboatra.
Ahenao ambany ny vidin'ny fifandraisana, tsy mila miantsona amin'ny mpamatsy akora marobe ny mpanjifa, hanampy azy ireo hamita ny serivisy izahay.
Ny andraikitra mazava. Raha misy olana ara-kalitao dia tsy mila mitsara ny mpanjifa raha olana ara-nofo na olana amin'ny fizotry ny famokarana izany. Tompon'andraikitra feno izahay.
PCBFuture dia mpanamboatra PCBA OEM izay afaka manome mpanjifa amin'ny famokarana PCB matihanina, fividianana fitaovana, famokarana haingana PCBA ary serivisy ambony kalitao hafa miaraka amin'ny mpanjifa. Raha manana fanontaniana na manontany ianao dia aza misalasala mifandraysales@pcbfuture.com , hamaly anao izahay ASAP.
Teo aloha: Serivisy Flex PCB Assembly
Manaraka: Birao fanaraha-maso indostrialy fivorian'ny turnkey feno
Fivoriamben'ny faritra mandroso
Birao boribory natao pirinty
Serivisy fivorian'ny fivoriamben'ny faritra
Fanamboarana ny birao fizaran-tany
Orinasa mpanamboatra birao
Serivisy amin'ny birao boribory
Fivoriamben'ny karatra faribolana
Fivoriamben'ny faritra elektronika
Fivoriamben'ny faritra vita pirinty
Asyria manam-pahefana vita pirinty
Orinasa fivoriamben'ny birao vita pirinty
Mpanamboatra fivoriamben'ny birao vita pirinty
Sampan-draharahan'ny fivoriamben'ny birao vita pirinty
Mpanamboatra Board Circuit Prototype
Fivorian'ny birao fanaraha-maso
Fivoriamben'ny tariby pirinty